General Khin Nyunt’s order to TERRORIZE Burma | Dr Ko Ko Gyi's Blog
ဘာသာရေးကြောင့် ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုမှန်သမျှကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းပေးရင် ဘာသာရေးအရ ခွဲခြားဖိနှိပ်မှု မရှိပါဘူးဆိုပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးက မွတ်စလင်တွေက ကမ္ဘာသိအောင် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ထောက်ခံဆန္ဒပြပေးနိုင်ပါတယ် »
1) use our agents, moles and informers in counter-intelligence operations in order to sow seeds of confusions among the public. The current developments demand this action which must be undertaken by any means necessary.
2) be absolutely sure there is no leakage of this operation.
Khin Nyunt, Colonel
(Translated by Dr. Maung Zarni)
မတရားညှင်းပန်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကို
နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ ထောက်လှန်းရေးတွေအတွက် အဲဒီတုန်းက ထောက်လှန်းရေး
အရာရှိချုပ် ခင်ညွန့်တို့မှာ တာဝန်အပြည့်အ၀ရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်။
ဒါကြောင့် တရားစွဲမှာပါ။ ဥပဒေ ပုဒ်မတွေကတော့ သေကြောင်း
ကြံစည်မှု၊ အသရေ ဖျက်မှု၊ ညှင်းပန်းမှု၊ ပုဒ်မ ၅၀၀၊ ပုဒ်မ ၃၀၆၊ ပုဒ်မ ၃၀၇၊ ၃၀၈
ပြီးတော့ အခြားပုဒ်မတွေအပြင် ကမ္ဘာ ICC မှာရှိတဲ့ အခြား တရားစွဲဆို နိုင်တဲ့
ဇန်န၀ါရီ (၅)ရက်တုန်းကလည်း အဘယ့်ကြောင့် သူတို့ကိုတရားစွဲဆို
ထိုက်သနည်း ဆိုတဲ့ စာကို နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေဖြစ်တဲ့ ICJ, ICC ကို
ပို့ထားတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၉ နိုင်ငံက နိုင်ငံတော်တရားသူကြီးချုပ်တွေ ဆီကိုလည်းပို့ထားပြီးပါပြီ။ via HOT NEWS ဂျာနယ် အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၃၁
Image via Aung Than
Tags: Aung San Suu Kyi, Burma, Khin Nyunt, Maung Zarni, Military intelligence, Myanmar, Ne Win, Thein Sein
This entry was posted on August 1, 2013 at 1:12 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.